Heshiiskii Burburay Ee Uu Manchester United U Saxeexay, Shaqsigii Sababta U Noqday Inuu Ka Laabto Heshiiskaas Iyo Ronaldinho Oo Arrimo Cusub Bannaanka Keenay | Warmaalnews.com
Sannadkii 2003, Manchester United ayaa isku diyaarisay inay ku dhawaaqdo heshiis ay la gaadhay halyeyga reer Brazil ee Ronaldinho, laakiin Barcelona ayaa qaab afduub oo kale ah uga soo dhex-gashay, waxaanay ka hor qaadday laacibkan.
Waraysi dheer oo uu Ronaldinho siiyey wargeyska FourFourTwo, ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ku xidhiidhsan noloshiisa, qaabkii uu kubadda cagta kusoo bilaabay, soolyaalkiisii ciyaareed, xiddigihii uu jeclaa daawashadooda xilligii uu carruurta ahaa, qaabkii uu Barcelona ugu biiray iyo heshiiskii burburay ee uu Manchester United la gaadhay ka hor intii aanu Camp Nou ka degin.
Waraysigan oo dheer, waxa aanu kasoo qaadanaynaa qaybta uu kaga hadlay heshiiskii burburay ee uu Manchester United u saxeexay iyo sidii ay Barcelona qaabka afduubka ah ugaga hor qaadday, sababta aanu u dooranay intanna waxay xidhiidh la leedahay ciyaarta xiisaha badan ee caawa ay iskaga hor imanayaan labada kooxood ee uu xiddiga reer Brazil ka hadlayo.
“Wax walba way noo dhaceen (Heshiiska) United. 48 saacadood ayay ahayd inaan ku tago, laakiin Sandro Rosll (madaxweynihii Barcelona) ayaa isoo wacay ka hor intii aanan dalabkooda helin. Wuxuu igu yidhi: “Haddii aan noqdo madaxweynaha Barca, ma ii imanaysaa?” Waxaan ku idhi haa. Waqtiga uu Rosell isoo wacay, kaliya arrimo yaryar ayaa ka dhinaa heshiiska aan United la gaadhay, wuxuuna ii sheegay inuu doonayo inuu ku guuleysto doorashada (madaxweynaha Barcelona). Aniguna waxaan u ballan qaaday inaan u ciyaari doono Barca. Wuxuu ahaa wada-xaajood degdeg ah.” Sidaas ayuu yidhi Ronaldinho oo bannaanka keenay qaabkii uu u burburay heshiiskii uu la galay Manchester United sannadkii 2003.
“Kaddib kooxda Ingiriiska waxaan u sheegay inaan doortay Barca. Waxay ahayd dookh sax ah. Reer Brazil mar walba waxay jelaayeen Barca. Waxaanu ku leenahay taariikh. Marka aanad garoonka ku jirin, waxaad moodaysaa in aanay jirin meel la mid ah oo Yurub ku taalla, markaa waxaanu jecel nahay inaanu ka ciyaarno halkaas.” Ayuu raaciyey.
Xiddiga reer Brazil waxa kale oo uu sheegay inuu u darsaday noloshii Catalonia, waxaanu yidhi: “In badan ayaa u darsaday Barcelona. Waxaan ku qaatay shan sannadood oo cajiib ah kooxda jecel weeraryahannada iyo ciyaaryahannada hibada leh.”
Intaas kaddib waxa uu Ronaldinho ka sheekeeyey isku-daygii ay kooxda Blackburn Rovers ee heerka labaad ee Ingiriiska ka ciyaarta ay ku doonaysay inay heshiis kula saxeexato markii uu AC Milan ka tegayey, waxaanu yidhi: “Waanu wada-hadalnay iyaga, laakiin aniga ayaa doonayey inaan dib ugu laabto gurigaygii Brazil.”